Afar Qof Oo Ku Dhintay Dagaal Deegaanka KALSHAALE Ku Dhex Maray Beelaha Buuhoodle Iyo Qori-lugud | Saxil News Network
Afar Qof Oo Ku Dhintay Dagaal Deegaanka KALSHAALE Ku Dhex Maray Beelaha Buuhoodle Iyo Qori-lugud
Dagaal maanta duleedka deegaanka Kalshaale ku dhex Maray Laba beelood ayaa waxa ka dhashay Khasaare dhimasho iyo dhaawac ah, sida ay xaqiijiyeen dadka deegaankaasi ku sugan.
Dagaalkan ayaa bilaabay ka dib markii sida la sheegay Maleeshiyaad ka soo jeeda beesha Cigaal Naaleeye Ee Dhulbahante ay toogasho ku dileen Marxuum ka soo jeeday beesha Barre Cabdalle (Soolamadow/Habar-jeclo).
Hasa-yeeshee waxa talo faraha ka baxday markii beesha Habar jeclo oo isku dayday inay si nabadgalyo ah ku soo qaataan Maydka Marxuumka halkaasi ku dhintay haddana si gaadmo ah loogu soo qaaday weerar. Weerarkaasi dambana waxa ku dhintay saddex beesha Qori-lugud ah, halka ay jiraan dhowr qof oo iyagan laga dhawaacey beesha Dhulbahante.
Ilaa hadda waxaan la ogeyn waxa sababay dagaalkan foosha xun ee dhibaatada keenay, taasi oo ku soo beegmaysa xilli la waday waan waan nabadeed oo la dhex dhigo beelaha walaalaha ah ee Qori-lugud iyo Buuhoodle.